ဇူးရစ်ဂန္ထဝင် 2017 ခုနှစ်တွင်အဖွဲ့ Format ကိုပြောင်းနေ
PGA Tour ရဲ့ဇူးရစ်ဂန္ထဝင် 2017 ခုနှစ် Format ကိုအဖွဲ့ Going
နိုဝင်ဘာ 9, 2016 - နှစ် 40 နီးပါးအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတွက်, PGA Tour 2017 အတွက်၎င်း၏အချိန်ဇယားပေါ်မှာ 2-ယောက်ျားသည်အသင်းကိုပြိုင်ပွဲရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ပြီးသားအချိန်ဇယားအပေါ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရဲ့ - တစ်ဦးချင်းစီလေဖြတ်ခြင်းမှ switch ကိုအောင်ကြောင်းတဦးတည်း အဖွဲ့ format နဲ့မှကစား။
အဆိုပါဂေါက်ကွင်း Channel ကိုအစီရင်ခံပထမဦးဆုံးသကဲ့သို့, ဇူးရစ်ဂန္ထဝင် သည်ကာလကြာရှည် PGA Tour ဟာ New Orleans ဧရိယာ၌ရပ်တန့်, 2017 ခုနှစ် မှစ. 2-ယောက်ျားသည်အသင်းကို format နဲ့မှတစ်ဦးချင်းစီလေဖြတ်ကစားရာမှအကူးအပြောင်းပါလိမ့်မယ်။
(အဆိုပါ PGA Tour သေးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဦးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည် switch ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်ဘူး။ )
ကဖြစ်ပျက်သောအခါ, ဇူးရစ်ဂန္ထဝင်ဟာ 1981 ဝေါ့ဒစ္စနေးကမ္ဘာ့ဖလားအမျိုးသားအသင်းချန်ပီယံရှစ်ကတည်းက PGA Tour ပေါ်ပထမဦးဆုံးအသင်းပြိုင်ပွဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ယင်းဇူးရစ်ဂန္ထဝင်အသင်း Format ကိုအလုပ်လုပ်တော်မူမည်ကိုမည်သို့
ကျနော်တို့သေးအတည်ပြုခဲ့သည်အသေးစိတ်ကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ဂေါက်သီး Channel ကိုအစီရင်ခံစာအတိုင်း, 2017 ဇူးရစ်ဂန္ထဝင်ထိုပုံစံနှစ်ခုပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်:
ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများ ကို (မိတ်ဖက်တစ်ဦးချင်းစီတလျှောက်လုံးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုကစား)
Foursomes (အတူတူပင်ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုရိုက်သည့်မိတ်ဖက်အခြားဤအရပ်မှ foursomes ၏အခြားအမည်, အခြားရိုက်ချက် )
ဟုတ်ကဲ့အဲဒီသူတို့သည်ကစား မှလွဲ. သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား, Solheim ဖလားနှင့်အခြားနာမည်ကြီးအသင်းပြိုင်ပွဲများတွင်အသုံးပြုအတူတူ Doubles ကို formats ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါဇူးရစ်ဂန္ထဝင်လေဖြတ်ကစားတည်နေကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, အစီရင်ခံစာအရသိရသည် 80 2-ယောက်ျားသည်အသင်းများပြိုင်ပွဲကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ လယ်ပြင်၌ဒုတိယအကျော့အပြီး 35 သင်းမှအဖြတ်ခံရလိမ့်မယ်။
ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများလေဖြတ်ကစားဖြစ်ပါတယ် ပိုကောင်းဘောလုံးကို ; သောမိတ်ဖက်တစ်လျှောက်လုံးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘောလုံးကိုကစားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပေါက်တွင်, သူတို့ရမှတ်များနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နိမ့်ရမှတ်အသင်းရမှတ်အဖြစ်မှတ်တော်မူ၏။ Rory McIlroy အာဒံဖြစ်သူ Scott မိတ်ဖက်ဖြစ်ကြသည်ရုံနှစျခုအမည်များကိုထုတ်ပစ်ရန်နှင့် Rory ပထမဦးဆုံးအပေါက်ပေါ်တွင်4အာဒံ5စေသည်လျှင်, အဖွဲ့ကရမှတ်4ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 2017 ဇူးရစ်ဂန္ထဝင်အပေါ်မှာပိုပြီးအသေးစိတ်
အဆိုပါပြိုင်ပွဲ Avondale တစ်ဦးက New Orleans ဆင်ခြေဖုံး TPC ဝီဇီယားနားဂေါက်ကွင်းမှာဧပြီလ 27-30 ဘို့စီစဉ်ထားသည်။
ဂေါက် Channel ကိုဖွင့်ဂျော့ဂ်ျ Savaricas အစီရင်ခံအဖြစ်ပုံစံအပြောင်းအလဲများအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်:
ဝင်သူထိပ်တန်း 80 အရည်အချင်းပြည့်မီဂေါက်သီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသင်းဖော်ကို select နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အနိုင်ရတဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်များသို့ရလိမ့်မယ် ချန်ပီယံလိဂ်၏ပြိုင်ပွဲ နှင့် PGA Championship ပြိုင်ပွဲ အောင်ပွဲ၏ရလဒ်အဖြစ်, ဒါပေမယ့်ဝင်ငွေမည်မဟုတ် မာစတာ ဖိတ်စာ။
တစ်ဦးကပုံမှန် PGA Tour ပြိုင်ပွဲဆု 500 FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ် အနိုင်ရခြင်းငှါ၎င်း, အဖွဲ့-format နဲ့ဇူးရစ်ဂန္ထဝင်အနိုင်ရတဲ့အသင်းကိုအပေါ်ဂေါက်သီး၏တစ်ဦးချင်းစီမှ 400 မှတ်ကိုငါပေးမည်။
အနိုင်ရတဲ့အသင်းနှစ်ဦးစလုံးအင်္ဂါများပုံမှန်ခရီးစဉ်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဝသကဲ့သို့တူညီသည် PGA Tour ပေါ်မှာကစားရန်နှစ်နှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဇူးရစ်ဂန္ထဝင်ပထမဦးဆုံး 1938 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ပထမဆုံးချန်ပီယံကစားခဲ့ပါတယ် "Lighthorse" ဟယ်ရီ Cooper က ။ ဒါဟာ 1958 ခုနှစ်ကတည်းကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဆိုပါ PGA Tour အချိန်ဇယား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Billy Casper ရဲ့ 51 PGA Tour အောင်ပွဲ၏နောက်ဆုံး 1974 ခုနှစ်တွင် 1975 ၌ဤပြိုင်ပွဲအတွက်ဖြစ်ပျက်, Lee က Trevino အနိုင်ရကာ bogey မပါဘဲတစ်ခုလုံးပြိုင်ပွဲသွား၏။ နဲ့ Jack Nicklaus ပြိုင်ပွဲသမိုင်း၌ 1973 အခန်းထဲရောက်တော့3နှစ်လမ်းပိုင်းအတွက် PLAYOFF အတွက်အနိုင်ရခဲ့သည်။
PGA Tour သမိုင်းအတွက်ရေးအဖွဲ့ပြိုင်ပွဲများ
ကျနော်တို့ 2017 ဇူးရစ်ဂန္ထဝင်နှစ် 40 နီးပါးအတွင်း PGA Tour ပေါ်ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ကဖြစ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထိပ်မှာကဆိုသည်။
နောက်ဆုံးကတော့ 1981 ဝေါ့ဒစ္စနေးကမ္ဘာ့ဖလားအမျိုးသားအသင်းချန်ပီယံရှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
1971 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းလေဖြတ်ကစားပြိုင်ပွဲအဖြစ်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးကြောင့်လူသိများခဲ့သည်အဖြစ်ဒစ္စနေး, ဂျက် Nicklaus က၎င်း၏ပထမဆုံးသုံးနှစ်အသီးအသီးအအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 1974 ခုနှစ်တွင်က 2-ယောက်ျားသည်အသင်းကို format နဲ့မှ switched နှင့် 1981 ခုနှစ်ဖြစ်ရပ်ကတဆင့်နိုင်အောင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ 1982 မှာ, နောက်ကျောတစ်ဦးချင်းစီလေဖြတ်ကစားရန် သွား. , ဒါကြောင့်နောက်ဆုံး 2012 ခုနှစ်မှာကစားခဲ့သည်သည်အထိကြောင်းပုံစံနှင့်အတူနေ၏။
1981 ခုနှစ်ကတည်းကနှစ်များတွင်ဒါခေါ် "ရီစရာရာသီ" တွင်အချို့အဖွဲ့သည်ပြိုင်ပွဲတှေရှိခဲ့တယျ - တရားမဝင်ပိုက်ဆံဖြစ်ရပ်များ။ သို့သော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပုံစံမတာဝန်ရှိသူတဦးက PGA Tour ဖြစ်ရပ်များ။
အသင်းကိုပြိုင်ပွဲသို့သော်ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ချိန်ကပိုပြီးဘုံရှိကြ၏။ အဆိုပါမိုင်ယာမီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေး Ball ကို, 1920 နှင့် 1930 အတွက်ခရီးစဉ်ရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ circuit ကိုအပေါ်ပိုကြီးဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အနိုင်ရ twosomes Gene Sarazen / ဂျော်နီ Farrell, လီယို Diegel / Walter Hagen, Ralph Guldahl / ဆမ် Snead, ဘင် Hogan / Gene Sarazen နှင့်ဂျင်မီ Demaret / ဘင် Hogan ပါဝင်သည်။
ထိုအထဲတွင် Byron နယ်လ်ဆင်ရဲ့ 1945 ရာသီ သည်မိုင်ယာမီပြိုင်ပွဲသည်သူ၏ 11 နှစ်ဆက်တိုက်အနိုင်ပေးတဦးနှင့်အသက် 18 စုစုပေါင်းအဲဒီနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာဘူး McSpaden ပူးပေါင်း။
အမေရိကန်ပွင့်လင်း Winners: အဆုဖလားရုပ်သိမ်းတော့သူကားအဘယ်သူအားလုံးဂေါက်သီး
2019 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
1997 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: Baker-Finch အောက် Hits ပြီးနောက် Leonard နိုင်
အမေရိကန်ပွင့်လင်းပြိုင်ပွဲများတွင်ဘင် Hogan ရဲ့ Amazing မှတ်တမ်း
2017 မာစတာပြိုင်ပွဲ: ဆာဂျီယိုနေတဲ့ဗိုလ်မှူး (နောက်ဆုံးတော့) ဆွတ်ခူး
ဘီစီ (သို့မဟုတ်ဘီစီ) - မဲရေတွက်ခြင်းနှင့်နံပါတ် Pre-ရောမသမိုင်း
အဘယ်သူသည် Palmyra, ဆီးရီးယားအတွက်ရှေးပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဂရုစိုက်?
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ်ထိပ်တန်း5ဂျက် Nicklaus ရာသီ
အဆိုပါ Mainsail ဖိအားပေးရန်လုပ်နည်း
သင်ကဆန့်ကျင် Vaxxers အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို
အပင်အတွက် Meristematic တစ်ရှူး: တစ်အဓိပ္ပာယ်
သင့်ရဲ့ Homeschool သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမွမ်းမံများအတွက်ရိုးရှင်းသောသိကောင်းစရာများ
5 elf Movie, ကိုးကား: ချစ်စဖွယ်လုပ်ပြီး Buddy ဘဝကချစ်မှသင်မည်သို့သွန်သင်
Frau Holle ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ
မာတင်ကျွန်တော်ဇာတ်ကားလှမျးမိုးမှုခံရဒါက 8 Classic ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးများနှင့်အိမ်သာ: Daily သတင်းစာနေထိုင်မှုကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်ရှင်းတမ်းများရေးထားလုပ်နည်း
ပြင်သစ် Jokes နှင့် Funny ပြင်သစ်အကြောင်းကိုးကား